सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो?
कमला गुरुङ शनिबार, वैशाख ३, २०७९, ०६:०२:००
काठमाडौं - महिलाले जन्मदा नै पाठेघरमा निश्चित अण्डाहरु लिएर आएको हुन्छ। ती अण्डाहरु उमेर अनुसार विस्तारै सकिँदै जान्छन्। एक स्वस्थ उमेरमा आमा नबने पछि सन्तान नहुने र बाँझोपनको समस्या पनि देखिने सम्भावना हुन्छ।
सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो? ढिलो सन्तान जन्माउँदा कस्तो समस्या आउन सक्छ? लगायत विषयमा हामीले स्त्री रोग तथा आइभीएफ विशेषज्ञ डा नुतन शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। डा शर्मासँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
सन्तान जन्माउने सही उमेर कुन हो ?
– महिलाको हकमा सन्तान जन्माउने सही उमेर २१ देखि २९ वर्षसम्म हो।
– ३० वर्षको उमेरसम्म एउटा महिला आमा बन्न आवश्यक छ।
– जन्मदेखि नै महिलाले निश्चित अण्डा लिएर आएको हुन्छ। ती अण्डाहरु विस्तारै महिनावारी हुँदा सकिँदै जान्छ।
– ३० देखि ३५ वर्षपछि अण्डाहरु घट्दै जान्छ। ४० वर्षसम्म आइपुग्दा पाठेघरमा भएको अण्डा लगभग सकिन्छ।
ढिलो सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चालाई केही जोखिम हुन्छ?
– ढिलो सन्तान जन्माउँदा आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम हुन्छ।
– ढिलो सन्तान जन्माउँदा अण्डाहरु पुरानो र बुढो हुने भएकाले बच्चाहरुमा डाउन सिन्ड्रोम हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
– बालबालिकाहरुको विकास असामान्य हुन सक्छ। गर्भपतन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
– आमालाई रक्तचाप, मधुमेह लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ।
– ३५ वर्ष कटेपछि महिलाको पाठेघरमा फाइबरोइड जस्तो ट्युमर पनि पलाउन सक्छ।
२७/२८ वर्षको उमेरमै पनि कतिपय महिलाहरुमा बच्चा नबस्ने समस्या किन हुन्छ?
– बढ्दो अस्वस्थकर जीवनशैली यसको प्रमुख कारण हुन्।
– बढ्दो तनाव, अस्वस्थकर खानपान, निष्क्रिय जीवनशैली, पाठेघरको संक्रमण, गर्भपनतले बच्चा नबस्ने समस्या बढाउँदैछ।
बाँझोपनको समस्या पनि बढ्दो क्रममा छ?
– विगत २१ वर्षमा बाँझोपनको समस्या दुई गुणाले बढेको मेरो अनुभव छ।
बाँझोपन बढ्नुको कारणहरु के के हुन् ?
– ढिलो उमेरमा विवाह गर्नु, संक्रमण, पाठेघर ट्युमरको जोखिम पनि बढी हुन्छ।
– बाँझोपनको समस्या महिलामा मात्र नभई पुरुषमा पनि निकै बढेको छ।
– बढ्दो तनाव र वातावरण पनि बाँझोपनको प्रमुख कारणमध्ये एक हुन्।
बाँझोपनको समस्या हुनुमा महिला र पुरुष दुवै जिम्मेवार हुन्छन्?
– बाँझोपनको समस्या हुनुमा महिला र पुरुष दुवै जिम्मेवार हुन सक्छन्।
– परामर्शका लागि आउँदा दुवै दम्पत्ति नै आउन म सुझाव दिन्छु।
– पुरुषमा पनि बाँझोपनको समस्या बढी रहेकाले दुवैले परीक्षण गराउन आवश्यक छ।
बाँझोपनको समस्याबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
– उपचारको पाटोमा जानुभन्दा पहिले नै रोकथाम गर्नु राम्रो हुन्छ।
– बाँझोपनको समस्याबाट बच्न समयमै आमा बन्नु आवश्यक छ।
– एक स्वस्थ महिलाले नै स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिन सक्छिन्।
– संक्रमणको नियन्त्रण, परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको ज्ञान र स्वस्थकर जीवनशैलीबाट यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
परिवार नियोजनको अस्थायी साधनमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कुन हो ?
– कण्डम सबैभन्दा राम्रो अस्थायी साधनमध्ये एक हो।
– कण्डमको प्रयोगले संक्रमण हुँदैन र बच्चा पनि बस्दैन।
– कपर टीले पाठेघरमा संक्रमण गराउँछ। डीपो सुई हर्मोन भएकाले यसले पाठेघरमा हुने संक्रमणलाई रोक्दैन।
बाँझोपनको उपचारहरु के के छन्?
– परामर्श सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी उपचार हो जस्तो लाग्छ।
– बाँझोपनले दम्पत्तिलाई मात्र नभई पुरा परिवारलाई नै मानसिक र सामाजिक तनाव हुन्छ।
– आइभीएफ भनेको अन्तिम विकल्प हो। त्यो भन्दा पहिले बिरामीको समस्याहरु बुझ्नुपर्छ।
– कसैको दुई वटा ट्युब बन्द छ। अण्डाको मात्रा निकै कम छ। श्रीमानको शुक्रकिट नै कम छ र लामो समयदेखि प्रयास गर्दा पनि सन्तान भएको छैन भने आइभीएफमा जानुपर्छ।
अन्त्यमा यहाँको सुझाव छ?
– व्यावसायिक रुपमा सफल हुने क्रममा महिलाले आमा बन्न नै बिर्सिन पुग्छन्।
– ढिलो उमेरमा सन्तान जन्माउँदा बच्चा नबस्ने र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ।
– ढिलो आमा बन्न चाहनेहरुका लागि पनि अण्डा फ्रिज गर्ने नयाँ प्रविधि आइसकेको छ।
– यो प्रविधि अन्तर्गत कुनै पनि महिलाले जति वर्षका लागि पनि अण्डा फ्रिज गरेर राख्न मिल्छ। र, पछि बच्चा जन्माउन सकिन्छ।